Ngaba ikhona okanye ayikho imeko yezoqoqosho kuqoqosho lwamanye amazwe? | Ezezimali
Ngaba kukhona okanye akukho kudodobala kuqoqosho lwamanye amazwe?
Enye yezona zinto zohlwaywa kakhulu kwiimarike zezabelo kukuba uqoqosho lwamanye amazwe lunokuntywila kuqoqosho. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba abatyali zimali abancinci nabaphakathi behlengahlengisa izikhundla zabo ngenxa yokoyika okucacileyo ukuba iimarike zentengiso phantse kwihlabathi liphela zinokuntywiliselwa Inkqubo ebalulekileyo ye-bearish. Apho ilahleko ebonakalayo inokwenziwa kwipotifoliyo yezokhuseleko. Xa ngeli xesha amathandabuzo kwiimarike zezemali yenye yezinto eziqhelekileyo kwizenzo zeearhente ezahlukeneyo zezemali.
Ngaphakathi kulo mxholo ngokubanzi, akukho mathandabuzo ukuba umjikelo wehlabathi ngoku ulahlekelwa ngamandla, nangona izikhombisi eziphambili zisacebisa ukuba iyaqhubeka nokuba banzi. Nokuba kunokwenzeka ukuba ndibethe ezantsi kwaye ngale ndlela ikwisikhundla sokuphinda ubuye ngamandla athile kumaxabiso akhoyo ngoku. Ayothusi into yokuba kukho abahlalutyi beemarike zokulingana abaqikelela ukuba akukho kuhla kwamandla emali okwenzekayo ngalo mzuzu. Nangona kubonakala ngathi kucacile ukuba singena kwinqanaba lokuzinza elingaqinisekanga kwaye nangayiphi na imeko lingazinzanga kunokuba bekulindelwe kwasekuqaleni.
Ngelixa kwelinye icala, akukho kunqongophala kwamanye amazwi agunyazisiweyo anoluvo lokuba iimpawu zokudinwa ziyaqinisekiswa, oko kukhokelela kuloyiko lokuba Ukudodobala kwemali kunokwenzeka kakhulu. Oko kukuthi, iimbono ezimbini ezahlukeneyo ngokupheleleyo ezivela komnye nomnye. Kodwa bathetha ukuba abatyali zimali abancinci nabaphakathi abazi ukuba mabenze ntoni ukusukela ngoku. Nokuba uza kuqala okanye ugcine izikhundla zakho kwiimarike zezabelo. Okanye ukuba ngokuchaseneyo, kungacetyiswa ngakumbi ukuba sizisuse zonke izikhundla okanye singangeni kwiimarike zemali ngaphambi kwento enokwenzeka kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Ukubonelela ngetyala elipheleleyo kwiakhawunti yokonga ngaphezulu kwezinye iindlela zobundlobongela.
1 Imeko yezoqoqosho
2 Kuthekani ukuba luloyiko nje?
3 Thatha ithuba lokusikwa
Ukuba le meko iqinisekisiwe kwiiseshoni ezilandelayo zorhwebo, ngekhe kubekhona ezinye iindlela zokufaka isicelo ngaphandle kokuphuma kwiimarike zezabelo ngokukhawuleza. Ayothusi into yokuba iya kubonisa ukuba kuya kubakho izilungiso ezibalulekileyo kumaxabiso esitokhwe. Ngaphandle kwezinye izinto eziqwalaselweyo zobuchwephesha kwaye mhlawumbi kude kube kwinqanaba lokujonga izinto ezisisiseko. Apho ngaphandle kwamathandabuzo ukuba uya kuba nexesha lokuzithenga ngamaxabiso akhuphisanayo kunangoku. Ayizothusa into yokuba ii-indices zesitokhwe zinakho ulahlekelwe phakathi kwe-10% kunye ne-30% yoqikelelo lwamaxabiso. Le yipesenti ebalulekileyo ukuba ulumke ngakumbi kunxibelelwano olunokubakho namaxabiso emarike yemasheya.
Ngelixa kwelinye icala, ayifanele ilibale ukuba akukho nto unokuyifumana kwiimarike zezemali kwaye ewe kakhulu ukulahleka. Kungenxa yokuba eneneni, amathontsi anokuba nobundlobongela kwaye phantsi kokungazinzi okukhulu kulungelelwaniso lwamaxabiso abo. Ukujongana nale meko, akukho nto ingcono kunokuba ulumke kwizenzo kwaye ukhethe ezinye iindlela zotyalo-mali. Okona kulungileyo koku kuya kuba kukukhetha iziphumo ezivela kwimali engenayo esisigxina. Ngenzuzo phakathi kwe-1% kunye ne-2% kunye nokugcina ukugcinwa kwe-visa yonke ngokhuseleko olupheleleyo. Ngaphandle kokuvezwa kukuhla nokuhla kweemarike zezemali.
Kuthekani ukuba luloyiko nje?
Ukuba, ngokuchaseneyo, kwaye xa ujongene nombuzo wokuba ingaba akukho kusini na kuqoqosho lwehlabathi, impendulo iyalandula, isisombululo iya kuba kukungena kwiimarike zezabelo. Ukuya kwinqanaba lokuba amaxabiso abalulekileyo esitokhwe anokufezekiswa. Ngokukodwa ekusebenzeni kujoliswe kwixesha eliphakathi nelide Apho kungafunyanwa iinzuzo ezinkulu zenkunzi ukuba isigqibo sithathiwe sokuba imarike yemasheya yeyona mpendulo ilungileyo kutyalo-mali ngalo mzuzu kanye. Ngaphandle kwenyani yokuba kunokubakho izilungiso ezithile kwixabiso lokhuseleko. Kodwa oko kuyakunceda ukwandisa okanye ukuphucula izikhundla ukusukela ngoku.
Ngelixa kwelinye icala, kuya kubakho uthotho lwexabiso elinokusebenza ngcono kunabanye. Njengomzekelo, ezo icandelo lebhanki okanye iinkampani ezijikelezayo ezinokuba nokukhula okuphezulu kakhulu kunabanye. Ngayiphi na imeko, isenokuba lithuba loshishino ekuyimfuneko kulo ukuba linike ingqalelo kuzo zonke izinto eziguquguqukayo kwezoqoqosho ezivela kwezi veki zizayo kwaye ezinokunika olunye ulwazi malunga nokuba kwenzeka ntoni na kwiimalike zamashishini ezamashishini ezemali.
Thatha ithuba lokusikwa
Kwiindlela eziya phezulu, umthetho oqhelekileyo phakathi kwabatyali zimali abanamava kukulinda ukunciphisa amaxabiso eenkampani ukungena kwimarike ngamaxabiso akhuphisanayo, oko kungakhokelela kukunyuka okuphezulu kwixabiso. Amathuba amakhulu okuxabisa. Oku kusikeka kwenzeka xa kukho "ukudinwa" kwindawo yokuthenga kwaye ukuthengisa kuqala ukuntywila, oko kukuthi, xa imarike ithengwe kakhulu kwaye ifuna uhlengahlengiso kumaxabiso ukuze iqhubeke nokunyuka kwayo.
Ezi "ziqhekeza" kwixabiso layo locaphulo, apho ukuthengisa kuqala ukuvela, kwenzeka amaxesha amaninzi ngexesha lenkqubo yokwenyusa, nkqu nabahlalutyi bemarike yemasheya bayichaza njengeiintshukumo zentengiso esempilweni ngokupheleleyo”Esebenzela ii-indices, amacandelo okanye izitokhwe ukufumana amandla ngakumbi kwiiseshoni ezilandelayo zorhwebo. Le yinto enokwenziwa ukuba ekugqibeleni akukho kudodobala kwezoqoqosho kwaye yonke into isisiphumo sokuphola kancinci kuqoqosho kwihlabathi liphela. Apho, akusayi kubakho sisombululo sibhetele sokwenza ukonga kunenzuzo kunokukhetha iimveliso ezinxulunyaniswe namashishini. Phakathi kwabo, ukusebenzisana kwemali kunye nokuthengwa kunye nokuthengiswa kwezabelo kwimarike yemasheya. Kodwa oko kuyakunceda ukwandisa okanye ukuphucula izikhundla ukusukela ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ngaba kukhona okanye akukho kudodobala kuqoqosho lwamanye amazwe?
Ungawongeza njani umhlala-phantsi omncinci kubantu abadla umhlalaphantsi?
Ibex 35 ingaphantsi kwamanqaku ayi-9.000